प्रवास :: Nepal Post Dainik प्रवास | Nepal Post Dainik
कोरोना भाइरस विरुद्धको रुसीखोप भारत सहितका केही देशहरुमा पनि परीक्षण गरिने
काठमाडौं २३ भदौ । रुसमा विकास गरिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप भारत सहितका केही देशहरुमा पनि परीक्षण गरिने भएको छ । स्पुत्निक पाँच नाम दिइएको सो खोपको भारत सहितका केही देशमा यसै महिनामा परीक्षण गर्न लागिएको रुसी थप यता
भारत र चीनबीच वार्ता सुरु भएपनि तनाव बढदै
काठमाडौं ‌ २३ भदौ । भारत र चीनबीच वार्ता सुरु भएपनि तनाव पनि बढीरहेको छ । विविादित हिमाली क्षेत्रमा दोहोरो गोली चलेको छ । चीनको जनमुक्ति सेनाले भारतीय सेनाले विवादित हिमाली सीमा क्षेत्रमा वार्निङ् शट्स वा चेतावनीस्वरूप गोली थप यता
डढेलो निभाउने क्रममा १९ को मृत्यु
बेइजिङ १८ चैत । चीनको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रस्थित जंगलमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा १९ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये १८ जना अग्निनियन्त्रक र एकजना वन रक्षक भएको बताइएको छ । स्थानीय टेलिभिजनले समेत आगलागीको भिडिओ सार्वजनिक थप यता
मदिरा पिएर नेपाली युवाहरुबीच ‘ग्याङ फाइट’ हुँदा एकजनाले ज्यान गुमायो
सिड्नी ११ चैत । अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा मदिरा पिएर मात्तिएका नेपाली युवाहरुबीच 'ग्याङ फाइट' हुँदा एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्। दुई पक्षबीच भएको कुटाकुटका क्रममा २३ वर्षीय युवकको ज्यान गएको अष्ट्रेलियन सञ्‍चारमाध्यले जनाएका थप यता
पोल्यान्डमा बच्चाको जन्म दिने बितिक्कै कोरोना संक्रमित आमाको मृत्यू
पोल्यान्ड ८ चैत । पोल्यान्डमा एक २७ वर्षीया स्वस्थ महिलाले बच्चालाई जन्म दिएलगत्तै कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु भएको छ । नाम सार्वजनिक नगरिएकी ती महिलासहित पोल्यान्डमा मृत्यु हुनेको संख्या छ पुगेको छ । विश्वमै यति कम उमेरमा थप यता
सामुहिक बलतकारको आरोपमा चार जनालाई भयो फाँसी
काठमाडौं । निर्भया सामुहिक बलात्कार र हत्याका चारै दोषीहरुलाई आज विहान साँढे पाँच बजे भारतको सर्वाेच्च अदालतले फाँसी दिएको छ । चारै दोषीहरुलाई फाँसी दिनु भन्दा अगाडि उनीहरुको अन्तिम ईच्छाको बारेमा सोधिएको थियो । तर चारै थप यता
काठमाडाैं २ चैत । स्पेनी प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजकी पत्नी बेगोना गोमेजलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएकाे छ। स्पेनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उनलाई काेराेना संक्रमण भएकाे शनिबार राति जनाएकाे थप यता
२ चैत । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै पोर्चुगलका सुपर स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो स्टार होटललाई अस्पतालमा परिवर्तन गर्न सुरु गरेका छन् । पोर्चुगलमा समेत कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि रोनाल्डोले विरामीको थप यता
यी वृद्धा दैनिक १ किलो माटो खान मन पराउछिन्
काठमाडौं १ चैत । मान्छे पनि अजिव अजिवको हुन्छ ? कति मान्छेले के के खान मन पराउँछ ? कोही मानिसको माटो खान रुचाउँछन् । यस्तै, विश्वमा एक महिलाले दैनिक एक किलो माटो भोक नलागेपनि खाने गरेकी छिन् । उत्तरप्रदेशको एक गाउँमा बस्ने एक ९० थप यता
छोराको हत्या गर्न बन्चरो लिएर हिँड्ने अफ्रिकी राजा गिरफ्तार
अफ्रिका १ चैत । छोराको हत्या गर्न भनेर हिँडेका दक्षिण अफ्रिकी राजा डालिनडिएबोलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ। बीबीसीका अनुसार राजदरबारमै राजा बुएलिकाया डालिनडिएबो बन्चरो लिएर छोरा आजिनाथी जेललिज्वे खोजिरहेका थप यता